I-BTO-22 yocingo oluhlabayo oluphezulu lweplastiki / i-PVC Yidi
Isefu olukiweyo wocingo
Isikrini se Window
ngeplastiki / PVC Camera razor ucingo oluhlabayo BTO-22
Intambo ebiyelweyo yesitshetshe, luhlobo olutsha lomnatha okhuselayo. Le blade yocingo oluhlabayo ineempawu ezigqwesileyo ezinje ngenkangeleko entle, ezoqoqosho kunye nokusebenza, isiphumo esihle sokuthintela ukubhloka kunye nolwakhiwo olufanelekileyo.
Igama lemveliso coil thermal bto-22 concertina razor ucingo oluhlabayo
Ubungakanani becingo 2.0-2.5mm
Uhlobo blade BTO-18, BTO-22, BTO-30, CBT-60, CBT-65 njl.
Ukwahlulahlula umgca osisigxina wocingo, ucingo lwe khonsathi, ucingo olunqamlezileyo locingo oluhlabayo, ucingo olucekeceke ucingo locingo
Ububanzi bekhoyili 450mm, 500mm, 650mm, 700mm, 900mm, 960mm, 1000mm njl
Ubude bekhava 5m-15m
Ukupakisha malunga ne-4.5kg-18kg umqulu ngamnye, okanye i-20-50kg ngeroli nganye; iphepha elingangeni manzi ngaphakathi; ngaphandle kweebhegi zokuluka. ; Malunga ne-15 rolls ngenqwaba encinci. ibhokisi ukupakisha ibhokisi.
Inombolo yerefurensi Ubukhulu (mm) Ubungakanani becingo Ubude beBarb Ububanzi bebar Isithuba sebarb
I-BTO-10 0.5 ± 0.05 2.5 ± 0.1 10 ± 1 13 ± 1 26 ± 1
I-BTO-12 0.5 ± 0.05 2.5 ± 0.1 I-12 ± 1 15 ± 1 26 ± 1
I-BTO-18 0.5 ± 0.05 2.5 ± 0.1 18 ± 1 15 ± 1 33 ± 1
I-BTO-22 0.5 ± 0.05 2.5 ± 0.1 22 ± 1 15 ± 1 34 ± 1
I-BTO-28 0.5 ± 0.05 2.5 28 15 45 ± 1
I-BTO-30 0.5 ± 0.05 2.5 30 18 45 ± 1
I-CBT-60 0.5 ± 0.05 2.5 ± 0.1 60 ± 1 32 ± 1 100 ± 2
I-CBT-65 0.5 ± 0.05 2.5 ± 0.1 65 ± 1 21 ± 1 100 ± 2
Intambo ebiyelweyo yesitshetshe, luhlobo olutsha lomnatha okhuselayo. Le blade yocingo oluhlabayo ineempawu ezigqwesileyo ezinje ngenkangeleko entle, ezoqoqosho kunye nokusebenza, isiphumo esihle sokuthintela ukubhloka kunye nolwakhiwo olufanelekileyo. Okwangoku, i-blade wire barbed isetyenziswe ngokubanzi kumashishini asezimbonini kunye nasezimayini, iiflethi zegadi, indawo yokugada imida, amasimi omkhosi, iintolongo, amaziko okugcina kunye noorhulumente kumazwe amaninzi. Izakhiwo kunye neendawo zokhuselo kumazwe amaninzi.
Ngaphakathi kwiphepha elingangeni manzi, ngaphandle ibhegi ephothiweyo yocingo oluhlabayo
Sisekelwe e-Hebei, e-China, ukuqala ngo-2013, ukuthengisa kwi-mpuma ye-Asia (60.00%), South Asia (30.00%), Northern Europe (10.00%). Bamalunga nabantu abangalunganga kwiofisi yethu.
2.Ungaqinisekisa njani umgangatho?
Ngamaxesha onke isampulu yemveliso yangaphambi kwemveliso;
Uhlolo lokugqibela oluhlala luhleli ngaphambi kokuthunyelwa;
Yintoni onokuyithenga kuthi?
I-Gabion, i-barbed wire cage, i-Barbecue wire mesh, Isikrini seplastiki, i-Round-hole mesh
4. Yintoni inzuzo yentsimbi yethu yocingo lwegrill grill?
Iimveliso zethu zisebenzisa ukutya okungafunwa ukutya okwenziwe ngaphakathi, nto leyo eco-friendly kakhulu, icocekile kwaye ikhuselekile, kwaye iimethi zinokungasebenzi, kulula ukuzicoca, ukumelana nobushushu obuphezulu kunye nokuphila ixesha elide, njl.
5. zeziphi iinkonzo esinokubonelela ngazo?
Intlawulo ifikelela kulwazi
Hlaziya indlela iodolo ehamba ngayo
c. Thatha imifanekiso xa uzenzela
d.Thatha imifanekiso xa ulayishe izikhongozeli
Emva kokuthengisa emva kokuthengisa.
I-HEBEI YIDI YOKUTHUNYELWA NOKUTHUNYELWA KWENKXASO YOKUGQIBELA, LTD Yasekwa ngo-2019, inkampani yethu ivelisa ikakhulu kwaye ithengise i-welding mesh, isikwere ucingo enemingxuma, i-gabion mesh, i-hexagonal wire mesh, i-window yesikrini, i-wire galvanized, i-black iron wire, i-nail eziqhelekileyo. ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava eMveliso, ukuhlola kunye nokuyila, Sithumela kumazwe amaninzi, iThailand, iUnited States, iBelgium, iEstonia, uMbindi Mpuma, kunye neAfrika.Urhwebo lonyaka olungaphezulu kwezigidi ezili-100. inkampani yethu iye yaphuhliswa kwishishini elithumela ngaphandle kunye nabasebenzi abangama-220 kubandakanywa amagcisa angama-20 kunye neeseti ezingama-80 zoomatshini abaphambili kunye nezixhobo zokuhlola. Ngeli xesha, inkampani yethu yenye yezona zinto zinkulu zenziwe ngeengcingo ezenziwe ngomnatha kubavelisi e-Anping, China. Ngaphezulu kwe-90% yeemveliso zethu zithunyelwa kumazwe angaphandle. Siqhayisa ngetekhnoloji ephezulu yemveliso kunye namava atyebileyo emveliso.
Egqithileyo intsimbi engenacici i-razor wire BTO-22
Okulandelayo: Iipaneli zocingo zentsimbi ezingama-6 zenziwe nge-gauge
ngeplastiki ngocingo oluhlabayo
i-pvc yocingo lombane
Incakuba yebarbed wire for pakistan
Gxila ekuboneleleni ngesisombululo se-mong pu seminyaka emi-5.
intsimbi engenacici i-razor wire BTO-22
Idilesi:1-1-501, DONGFANG YIYUAN, ISITHILI SECHANG'AN, SHIJIAZHUANG CITY, CHINA
Inombolo kanomyayi:+86 15130853762